Sunday, June 16th, 2019 - 20:40:44
Xogta suuqa kala iibsiga ee caawa iyo majaladaha England
0 Friday August 21, 2015 - 22:11:13
(Kubadbile) Akhristayaal kusoo dhawaada xubin aan ku eegeyno majaladaha England kasoo baxa iyo caawa waxa ay ka qoreen suuqa kala iibsiga.
''Manchester United hurdo ayey la dhacday''
0 Friday August 21, 2015 - 21:35:58
(Kubadbile) - Wakiilka saxiixa cusub ee Chelsea Pedro ayaa sheegay in Manchester United ay seexatay marka la eego arintii ku saabsaneyd heshiiska laacibka reer Spain.
Warbixin: Manchester City oo heshiis shaqsiyadeed la gaartay Kevin De Bruyne
0 Friday August 21, 2015 - 21:04:54
(Kubadbile)- Manchester City ayaa heshiis shaqsiyadeed ka gaartay xiddigii ay muddada dheer ku raad joogtay ee Kevin De Bruyne.
Manchester City oo u dhawaaneysa saxiixa De Bruyne
0 Thursday August 20, 2015 - 23:33:51
Kooxda Manchester City oo lacago badan xagaagan ku qarash gareysay suuqa lana soo wareegtay xidigaha Raheem Sterling, Nicolas Otamendi, Fabian Delph, Patrick Roberts iyo Enes Unal ayaa kusii dhawaaneysa inay dhameystirto saxiixa laacibkii hore ee qadka dhexe uga dheeli jiray Chelsea.
Pedro: Fabregas ayaa sabab u ah inaan London imaado
0 Thursday August 20, 2015 - 23:15:13
Pedro oo dhawaan kusoo biiray kooxda ka dhisan Stamford Bridge ayaa qarsan waayay ciddii ku dhiiro gelisay inuu kamid noqdo kooxda Chelsea isagoo qarka u saarnaa ku biirida kooxda Man UTD mar uu la hadlayay tvga Chelsea.
Dhiiranaanta Mourinho iyo dhoohanaanta Van Gaal oo kartoon lagu cabiray
0 Thursday August 20, 2015 - 22:36:25
Manchester United oo qarka u saarneyd inay lasoo wareegto xirfadlaha garabka ka dheela ee qaranka Spain Pedro, ayaa daqiiqadii u danbeysay u weysay doonista Chelsea oo kula tartameysa horyaalka Epl.
Thierry Henry Oo Ka Warbixiyay Aqoonta Uu U leeyahay Pedro
0 Thursday August 20, 2015 - 19:05:47
Thierry Henry halyaygii hore ee kooxda Arsenal ayaa amaan kala dul dhacay Pedro , waxa uuna ku tilmaamay "xirfadle dhamays tiran".
Real Madrid Oo Ciyaaryahano Aan Caan Eheyn Ku Soo Iibsatay €82m
0 Thursday August 20, 2015 - 15:26:33
Ma jirto wax ciyaaryahan oo magac leh oo ay soo qaadatay Real Madrid,balse gudoomiye. Florentino Pérez waxa uu ciyaaryahano ku soo iibsaday €82 Milyan oo Euro waxaana dalbaday macalinka cusub ee kooxda Rafa Benítez.
Sawiro Man City Oo Soo Bandhigtay Ciyaaryahanka Otamendi
0 Thursday August 20, 2015 - 15:04:00
Kooxda Man City tababaraheeda Manuel Pellegrini ayaa waxa uu ku dhawaaqay in ay lasoo wareegeen daafacaii ugu wanaagsanaa ee horyaalka La Liga kaasi uu ku sheegay Nicolas Otamendi.
Warbixin: Real iyo Inter oo ciyaartoy Muhiim ah kala iibsaday 20 sano ee lasoo dhaafay
0 Thursday August 20, 2015 - 11:25:12
Kooxaha kala ah Real Madrid iyo Inter Milan ayaa labaduba waxa ay ku heshiiyeen in ay kala iibsadaan Mateo Kovacic waxa uuna noqday laacibkii tobonaad oo ay kala iibsadeen kooxahaa.
Chelsea oo Iibinaysa Willian kadib imaanshihii Pedro Sabab
0 Thursday August 20, 2015 - 11:20:05
Kooxda Chelsea ayaa lasoo sheegayaa in ciyaaryahankeeda dalka Brazil u dhashay ee lagu magacaabo Willian ay u soo bandhigtay in uu kala doortay Bayern Munich iyo Paris Saint-Germain.
Chelsea Oo Man City Iyo PSG Ka Dulqaadeysa Laacibkii Badali Lahaa Ivanovic
0 Thursday August 20, 2015 - 11:13:50
Kooxda Chelsea ayaa waxa ay dalab rasmi ah u dirsatay kooxda Monaco ciyaaryahanka kaga ciyaara dhanka bidix ee daafaca Layvin Kurzawa,maalmo yar ka dib markii ay soo iibsatay ciyaaryahanka Abdul Baba Rahman.
Man United oo Ruusha ka doonaysa Weeraryahan kadib guuldaradii Pedro
0 Thursday August 20, 2015 - 10:21:18
Manchester United iyo Tottenham ayaa lagu soo warinaya in ay isku haystaan saxiixa laacibka kooxda Dynamo Moscow Aleksandr Kokorin
Real Madrid oo fasixi karta Benzema iyo Arsenal oo han sare kale xiddigaan
0 Thursday August 20, 2015 - 02:27:16
Usbuucii lasoo dhaafay ayay aheyd markii kooxda Real Madrid ay dalab £45m ah kadiiday kooxda Arsenal oo u jeelan adeega weeraryahanka reer Farance Karim Benzema, balse Real ayaa u muuqata mid fasixi garta xidigaan sida aan kasoo xiganay majaladda The Telegraph oo kasoo baxda dalka England.
Southampton: Iib ma aha Sadio Mane
0 Thursday August 20, 2015 - 00:23:13
Kooxda kubadda cagta ee Manchester United oo weli suuqa ku jirta, baahina u qabta xidig weerarka ay ku xoojiso ayaa markan deyro kala kulantay kooxda Southampton oo dhowr jeer oo hore ay kasoo kalluumeysatay
West Ham oo heshiis kala gaartay Barcelona xidigeeda Alex Song
0 Wednesday August 19, 2015 - 21:48:34
Xiddigii hore ee Arsenal Alex Song oo 31 jeer qaab amaah ah uga soo muuqday kooxda ka dhisan garoonka Upton Park ayaa lagu wadaa inuu si toos ah uga mid noqdo kooxda West Ham
Newcastle oo sameysay saxiixeedii shanaad ee xagaagan
0 Wednesday August 19, 2015 - 21:37:37
Macallin Steve McClaren ayaa lasoo saxiixday 22 jirka garabka uga dheela kooxda kubadda cagta ee Marseille Florian Thauvin.
Juventus oo qarka u saaran inay lasoo saxiixato xidig daafac ah iyadoo iska iloowday da'yarka Draxler
0 Wednesday August 19, 2015 - 20:21:12
Agaasimaha guud ee kooxda Bianconeri Giuseppe Marotta ayaa ka dhawaajiyay in kooxdiisu ay caawa soo gebagabeyn doonto soo xero gelinta daafaca dadabta bidix uga dheela kooxda Porto iyo xulka Brazil Alex Sandro.
Manchester United oo musiibo ay ka heysato suuqa kala iibsiga
0 Wednesday August 19, 2015 - 19:36:57
Kooxda kubadda cagta ee Manchester United ayaa sanadkii labaad la daalaa dhaceysa musiibo iyo ibtilo ka heysata suuqa kala iibsiga xilli uu dadaal muujiyay guddoomiye ku xigeenka kooxdaa Ed Woodward.
PSG oo qandaraaska u kordhineysa Thiago Motta
0 Wednesday August 19, 2015 - 19:20:32
Paris Saint-Germain ayaa lagu soo waramayaa in ay wada-xaajood qandaraaska la xiriira la furtay Thiago Motta.
« Prev1 ... 337338339340341342343Next »